Sheekh Nuur Baaruud “Diyaar uma nihin mooshin dambe oo laga keena xukuumadda..” – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Nuur Baaruud “Diyaar uma nihin mooshin dambe oo laga keena xukuumadda..”
Guddoomiyaha gurmadka abaaraha Soomaaliyeed, haatanna loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka guddiga taakuleynta ciidamada Qaranka Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ku baaqay in gacanta loola tago xildhibaanadii mooshinka ka keena xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo hadal ka jeediyay xaflad xalay ka dhacday dugsiga sare ee booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali doonin mooshin dambe oo laga keeno xukuumadda federaalka Soomaaliya.
“Diyaar uma nihin mooshin dambe oo laga keena xukuumadda, dadka waxay inta badan ku sheekeystaan caddow ayaa soo abaabulay, Ilaahay magaciisa ayaan ku dhaartayee ciddii aan ku aragno iyadoo mooshin wada, waxaan ugu tageeynaa meesha ay joogaan, waana garaaceynaa” Sidaas waxaa yiri Sheekh Nuur Baaruud.
Sheekh Nuur Baaruud oo sida la ogsoon yahay ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku dhex milan dowladda Soomaaliya ayaa mowqifkiisa si weyn dadka uga yaabiyay.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ku eedeeyay inuu faragelin baahsan ku haayo shaqada baarlamaanka Soomaaliya.
Xukuumadda uu ra’iisul wasaaraha ka yahay Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa haatan cabsi ka qabta mooshin aan illaa iyo haatan la ogeyn cidda wada, waxaana xukuumadda hareeyay welwel ku saabsan Mooshin maalmihii ugu dambeysay suuqa lasoo geliyay.